တရုတ် phones and tablets များ အတွက် root tools collections ~ ကော်ပီဆရာကြီး
10:28 PM Huawie Root လုပ်နည်းများ No comments
1. ShuameSetup_1.0.3_general_2 by phyogyi14@myanaungtharr
2. QQPhoneManager_990634.2010 by phyogyi14@myanaungtharr
size : 11.07MB
3. romasterlab_1013 by phyogyi14@myanaungtharr
4. romaster_306 by phyogyi14@myanaungtharr
5. Cube Root for ICS 4.0.3
အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ tool လေးတွေမှာ ပါတဲ့ function လေးတွေကို ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြဗျာ။ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူး။
ဥပမာ။ ။ pattern lock ကျတာတွေ ပြန်ဖြေလို့ရမယ်။ recovery mode ထဲကို ၀င်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ၊
fastboot ထဲကိုဝင်လို့မရတဲ့သူတွေအတွက် ၀င်လို့ရမယ့် function လေးတွေပါပါတယ်။
မြန်အောင်သား ရေးသားသူ ဖြိုးကြီမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
U8950D Root ဖောက်ချင်းအပြည့်အစုံ
GALAXY S II (GT-I9100) Root-CWM Recovery
Huawei Ascend P1 U9200 (Root + Unlock)
Samsung Galaxy Tab (Root Zip)
Samsung Android Mobile များတွင် မြန်မာဖောင့်သွင်းန...
ဒီဂျေ ကလိချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အမျိုးကောင်းသား...
sm3WordFinder English To မြန်မာဘာသာပြန်..
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500/P7510 ကို Root လုပ်န...
China Tablet MOMO11 bird3 ကို Root လုပ်ခြင်း
Root Tool for Android Tablets(2.2 မှ ICS 4.0.3)ြ...
How To Reset All Samsung Mobile Codes + Samsung Mo...
MobileGo for Android 3.0.1.185 Full + Crack [Andro...
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Ringtone လေးတွေကို စိတ်ကြိုက်ဖ...
Google Play Store ကိုအလွယ်ကူဆုံးဝင်ရောက်နည်း
Android ဖုန်းကိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဖုန်း Unlock ...
Nokia N8 နဲ့ NOKIA & SONY SYAMBIAN ဖုန်း အတွက် မြန...